Khubarada hubka Kimikada oo loo ogolaaday in ay booqdaan Douma – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaKhubarada hubka Kimikada oo loo ogolaaday in ay booqdaan Douma
Hiiraan Xog, Apr 18, 2018:- Xukuumadda Suuriya ayaa sheegtay in kooxdii ka socotay hay’ada caalamiga ah ee ka hortaga hubka Kimikada ah ay howshooda ka bilaabeen magaalada Douma -oo ah goob la sheegay in weerar Kimiko ah uu ka dhacay.
Baarayaashani ayaa Sabtidii gaaray meel u dhaw caasimada Suuriya ee Dimishiq.
Balse si dhaqso ah looguma ogolaan in ay howshooda bilaabaan taasi oo keentay shaki ah in la doonayo in caddeymaha la qariyo.
Weerarkani looga shakisan yahay in loo adeegsaday hub Kimiko ah ayaa sababay in dowladaha Britain, Faransiiska iyo Mareykanka ay duqeeyaan bartilmaameedyo Suuriya ku yaalla.
Dowladaha Suuriya iyo Ruushka ayaa ku adkaysanaya in aysan jirin weerar Kimiko ah oo dhacay, ayna wararkaasi yihiin kuwa been abuur ah.
Hasa yeeshee Saxafi u dhashay dalka Mareykanka oo booqday goobta uu weerarka ka dhacay ayaa soo uruuriyay caddeymo ku saabsan in dadka deegaanka ay u sheegeen in weerar Kimiko ah halkaasi ka dhacay.